Concorde 1 afọ 10 ọnwa gara aga #1189
Nke a bụ maka "Concorde RW Reworked Version FSX & P3D"
Na ihe niile n'eziokwu, m ga-enye ụgbọelu a dị ukwuu.
Ka m hụrụ n'anya na Concorde, D thatKA na nke bụ isi enweghị bụ 100% arụmọrụ Concorde. Otu a nwere njikwa ala jọgburu onwe ya, na-emefu mgbe ị na-ebugharị ya, na-efu n'oge ụgbọ elu, nwere injin ndị ahụ mebiri n'oge ụgbọ elu na-eme ka ị daa na FL550 (dị nnọọ ka nke ahụ mere TWICE na ụgbọ elu site na Heathrow ruo Jacksonville), na mgbe ị daa n’ala ... nke ọma, ị ga - enweta njikwa ala.
Ekwesiri m ikweta, o juru m anya na ha wepụtara ihe a n'ihu ọha na ọnọdụ ọ dị ugbu a. Ọ BỤRỤ na nke a bụ nnụnụ na-akwụ ụgwọ, ọ na-aga n'ekwughị na ndị mmadụ ga-achọ nkwụghachi ụgwọ na aha ụlọ ọrụ ahụ ga-abanye na mposi ngwa ngwa.
M ga-asị na enwere m mmechuihu, mana nke ahụ bụ okwu ekwesighi
Concorde 1 afọ 9 ọnwa gara aga #1217
Enweghị m nsogbu ọ bụla na friji Concorde n'oge ọ bụla, njikwa ala anaghị arụ ọrụ. Cheta na Ctrl-J bu isi jetways ndabara.
Nsogbu na ịgbapu mmanụ ma na-ada site na mbara igwe bụ n'ihi na ọ nweghị ntuziaka maka Panel (Engine Engineer). E kwesịrị idozi ebe ziri ezi maka tankị mmanụ ụgbọ maka ezigbo mmanụ ọkụ, mmanụ ụgbọ ala na-agbanwe na Center nke nnukwu ike. N'ụzọ dị mwute, enweghị m akwụkwọ ntuziaka n'ebe ọ bụla, ọ bụkwa naanị m nwere ihe ịga nke ọma na-achọ ịnwapụta nhazi ziri ezi onwe m.